Sir David Amess: Ma nin Soomaali ah baa fuliyay dilkii xildhibaanka UK ee dhacay shalay? | Qaran News
Sir David Amess: Ma nin Soomaali ah baa fuliyay dilkii xildhibaanka UK ee dhacay shalay?
Writen by Qaran News | 1:27 pm 16th Oct, 2021
XIGASHADA SAWIRKA,HOUSE OF COMMONS
Taliska booliska magaalada ayaa sheegay in falkan “ay suuragal tahay inuu salka ku hayo argagixisnimo”.
Nin 25 jir ah oo British ah ayaa lagu xiray goobta isagoo loo heysto tuhunka ku aaddan falka dilka ah, booliskuna waxa ay sheegeen inaysan cid kale u raadineynin mas’uuliyadda falkaas dhimashada sababay.
Booliska ayaa qayb ka mid ah baaritaankooda hadda ku baaraya labo goobood oo ku yaalla magaalada London, sida ay sheegeen saraakiisha.
Waxa ay boolisku aaminsan yihiin in ninkaas uu kaligiis ku dhaqaaqay ficilka balse ay wali wadaan baaritaanno la xiriira sababaha keenay dhacdadaas.
Ninka la tuhunsan yahay ayaa ku xiran gobolka Essex, sida ay boolisku sheegeen.
XIGASHADA SAWIRKA,ANTHONY FITCH
Qoraalka sawirka,Ciidamo hubeysan ayaa isku gadaamay goobta lagu dilay xildhibaanka
Booliska ka howl gala magaalada ayaa sheegay in ciidankooda la dagaallanka argagixisada ay ku howlan yihiin baaritaanka, iyagoo kaashanaya khubaro ka socda qaybta howlgallada khaaska ah ee magacooda loo soo gaabiyo ERSOU.
Saraakiisha ayaa ka codsanaya dadweynaha inay lasoo wadaagaan xog kasta oo ku saabsan dhacdadaas, iyagoo si gaar ahna dalbaday inay lasoo xiriiraan dadka haya muuqaallada CCTV-ga ama noocyada kale ee duubay falka.
Markii uu weerarka dhacay kaddib, wasiirka amniga gudaha, Priti Patel, ayaa ka codsatay dhammaan laamaha booliska inay dib u eegis ku sameeyaan xaqiijinta amniga xildhibaannada “tallaabadaasna ay sida ugu dhakhsiyaha badan u qaadaan”.
Ms Patel ayaa sheegtay in dilkaas “uu ahaa weerar argax darro ah oo lagu qaaday dimuqraaddiuadda”, iyadoo intaas ku dartay in “su’aalo sax ah la iska weydiiyay amniga dadka shacabka matalaya”.
“Waxaad kulamo ku qaban kartaa Zoom… waxaad xitaa howlo aad u waaweyn ku fulin kartaa telefoonka,” ayuu yiri.
Dhanka kale, Kim Leadbeater, oo ah gabadha la dhalatay xildhibaanaddii hore ee la dilay, Ms Cox, oo qudheedana ah xildhibaan ayaa sheegtay in seygeeda uu ka codsaday inay xilka iska casisho kaddib dilka Sir David.
Kumuu ahaa Sir David Amess?
Waxyaabaha kale ee lagu bartay waxaa ka mid ahaa inuu hormuud u noqday Southend, howshiina waxaa qaby ka ahayd inuu u horseeday darajada magaalanimad
Ra’iisul Wasaare Boris Johnson ayaa ku ammaanay xildhibaanka la dilay “inuu hindise sharciyeedyo aad u badan u hirgeliyay si loogu caawiyo dadka nugul”, isagoo intaasna ku daray: “Maanta waxaan weynay nin fiican oo u adeegi jiray shacabka iyo saaxiib aan jecleyn oo sidoo kalena shaqo naga dhaxeysay”.
Qoraalka Muuqaalka,Boris Johnson ayaa sheegay in Sir David Amess uu ka mid ahaa dadka “ugu naxariista badan, ugu wanaagsan, uguna macquulsan dhinaca siyaasadda”
Jeff Woolnough, oo ah baadariga Catholic-ga ee deegaanka lagu dilay xildhibaanka ayaa Sir David ku qeexay “nin aad iyo aad u wanaagsan, ku fiicnaa diintiisa, saaxiibna la ahaa dhammaan dadka”.
“Waxa uu dhintay isagoo howshaas lafteeda dhexda uga jira, taasina waa arrin xusid mudan. Waxa uu geeriyooday isagoo u adeegaya shacabka,” ayuu yiri.
Baadarigan ayaa galinkii dmabe ee Jimcaha hoggaamiyay dadweyne maamuus u sameynayay Sir David, isagoo ku naaneysay “Mr Southend”.
Guddoomiyaha maamulka Southend, John Lamb, ayaa sheegay in Sir David uu ahaa “nin aad u wanaagsan, xildhibaan shaqo badan u hayay deegaankiisa, qof walbana u adeegay”.
Sidoo kale hoggaamiyaha xisbiga Shaqaalaha, Sir Keir Starmer, ayaa sheegay “in ay u adayd maalin madow oo naxdin leh”, isagoo intaas ku daray in waddanka “uu horay sidan oo kale u dareemay” markii la dilay Jo Cox.